June 2018 – စာအုပ်မြို့တော်
( ၁) မေး – တစ်နှစ်တစ်ခါ ပေါ်လို့လာ၊ ရာဇာမင်းလောင်း ထီးဖြူဆောင်း။ ( ၂) မေး – ဆုပ်လျှင် စူး၊ နမ်းလျှင် မူး၊ စားလျှင် ရူး။ ( ၃) မေး – တို့နွားတစ်ကောင် ဘို့တစ်ထောင်။ ( ၄) မေး – တို့နွားတစ်ကောင် ဘို့တစ်ထောင် ခြေရာလည်းပျောက် ရေလဲနောက်။ ( ၅) မေး – သူ့ပင်စည်က မြွေပွေးပြောက်၊ သူ့အသီးက ပြည်တောင်းလောက်။ ( ၆) မေး – နွားမတစ်ရာ ရေဆင်းလာ၊ ခြေရာလည်းပျောက် ရေလည်းနောက်။ ( ၇) မေး – ဖတ်လတ် ဖတ်လတ် ၂ […]
Posted in: UncategorizedLeaveacommentMM Book City	 30/06/2018
“မြန်မာ့ စကားဝှက်တမ်း (၁)”
မေး ( ၁ ) မေး – နေ့ချွတ် ည၀တ်။ ( ၂) မေး – အစိမ်းပေါ် အဖြူတင်၊ အဖန်လာမှ နီရောင်ဆင်။ ( ၃ ) မေး – သူ့ကိုရိုက်တော့ ချာချာလည်၊ ကြိုးကိုဆွဲပြီး ငိုရှာတယ်။ (၄ ) မေး – ကန်ထဲမှာရေ၊ ရေထဲမှာမြွေ၊ မြွေခေါင်းမှာရွှေ ( ၅ ) မေး – အညာကဆင်ဖြူ၊ အမွှေးထူ။ ( ၆ ) မေး – ဖူးခနဲထောင်၊ ဖောင်ခနဲလဲ၊ ရဲရဲနဲ့ တွဲလွဲဆွဲ။ ( ၇ ) မေး – သူ့အပင်နွဲ့ချောင်း မတက်ကောင်း၊ စားကောင်းပါရဲ့ ဖူးတံနဲ့။ […]
Posted in: UncategorizedLeaveacommentMM Book City	 29/06/2018
ဘဏ်ဓားပြတိုက်တဲ့ ဖြစ်စဉ်တစ်ခုမှာ… ဓားပြကနေအော်ပြောလိုက်တယ်… “ အားလုံး ငြိမ်ငြိမ်နေကြ…. ပိုက်ဆံ ဆိုတာ အစိုးရပိုင်တာ… အသက်ဆိုတာ မင်းတို့ပိုင်တာ…. “ ဘဏ်ထဲမှာရှိတဲ့ လူတွေ အားလုံးဟာ မြန်မြန်ဆန်ဆန်ပဲ ကြမ်းပြင်ပေါ်ကို ဝပ်လိုက်ကြပါတယ်။ သမားရိုးကျ ပြောမယ်ဆိုရင်တော့… ခုခံချင်တဲ့ စိတ်တွေ ဘဏ်ဝန်ထမ်းတွေမှာ ရှိပါလိမ့်မယ်… ဒါပေမယ့် ဓားပြတိုက်တဲ့လူ ပြောလိုက်တဲ့ စကားကြောင့် လူတွေ မြန်မြန်ဆန်ဆန် ကြမ်းပြင်ပေါ် ဝပ်ကျသွားတယ်…. ဒါကို အတွေးအခေါ်တွေ ပြောင်းလဲပြစ်လိုက်တဲ့ နည်းလို့ ခေါ်ပါတယ်…. အဲဒီအချိန်မှာ အမျိုးသမီး တစ်ယောက်ကတော့ မပေါ်တပေါ် မြူဆွယ်သလို ပုံမျိုးနဲ့ စားပွဲပေါ်မှာ လှဲနေပါတယ်တဲ့။ အဲဒီအချိန်မှာ ဓားပြက အဲဒီအမျိုးသမီးကို အော်ပြောလိုက်တယ်… “ သိက္ခာရှိရှိနေစမ်းပါ…. ဒါဓားပြတိုက်နေတာ မုဒိန်းကျင့်နေတာ မဟုတ်ဘူး… “ […]
Posted in: FeaturedLeaveacommentMM Book City	 29/06/2018
“အပြောင်းအလဲကို လက်မခံရင် နောက်ကျန်ခဲ့မယ်”
၁၉၉၀ ခုနှစ်လောက်က ရုံးတွေ ကုမ္ပဏီတွေမှာ ကွန်ပျူတာတွေကို စပြီး သုံးလာတယ်။ အရင်က စာရိုက်တဲ့ လက်နှိပ်စက်စာရေးမတွေ ကို ကွန်ပျူတာနဲ့ စာရိုက်တတ်အောင် သင်တန်းပေးကြတယ်။ အသက်ကြီးတဲ့ အမျိုးသမီးတွေက တသက်လုံးလက်နှိပ်စက် သုံးလာတာမို့ ကွန်ပျူတာနဲ့ စာမရိုက်ချင်ဘူးဆိုပြီး သင်တန်းတက်ဖို့ ငြင်းဆန်ကြတယ်။ ဒီတော့ သူတို့ ဘာဖြစ်သွားကြသလဲ။ အလုပ် ပြုတ်သွားကြတာပေါ့။ ခေတ်ပြောင်းတဲ့ ရေစီးကြောင်းမှာ လိုက်ပြီး မမြောပါနိုင်ရင်တော့ ကျန်ရစ်ခဲ့မှာပါပဲ။ အခု အင်တာနက် ခေတ်ဖြစ်နေပြီ။ နေရာတကာမှာ အင်တာနက်ကို တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် သုံးနေကြပြီ။ စင်္ကာပူက Shopping Mall ပစ္စည်းရောင်းတဲ့ ကုန်တိုက်ကြီးတွေ အင်တာနက်ခေတ်ကြီးမှာ ရုန်းကန်နေကြရပြီ။ အရင်က လူတွေတရုန်းရုန်းနဲ့ စည်ကားနေကြတဲ့ ကုန်တိုက်ကြီးတွေမှာ ပစ္စည်းဝယ်သူတွေ နည်းလာကြပြီ။ ဘာဖြစ်လို့လဲ။ လူတွေဟာ ကုန်တိုက်ကြီးတွေမှာ […]
Posted in: FeaturedLeaveacommentMM Book City	 28/06/2018
ပြင်သစ်စာရေးဆရာ အန်တွိုင်း ဆန်တက်ဇူပေရီ၏`မင်းသားလေး´(The Little Prince) ၀တ္ထုကို စာသမားအတော်များများသိကြပါသည်။ ကလေးများအတွက် နှစ်ခြိုက်ဖွယ်ပုံပြင်တစ်ပုဒ်ဖြစ်သကဲ့သို့ လူကြီးများအတွက် အတွေးပွားစေသော စာတစ်အုပ်လည်းဖြစ်ကြောင်း ဖတ်မိသူတို့လေးစားသိမှတ်ခဲ့ကြပါသည်။ `မင်းသားလေး´ကိုသိသော်လည်း ဆန်တက်ဇူပေရီ၏ အခြားဝတ္ထုတို – ရှည်များကိုကား သိသူနည်းလှပါသည်။ဆန်တက်ဇူပေရီသည် တိုက်လေယာဉ်မှူးတစ်ယောက်ဖြစ်၍ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်း နာဇီတို့နှင့်တိုက်ခိုက်စဉ် ကျဆုံးသွားခဲ့ပါသည်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မတိုင်မီကလည်း သူသည်စပိန်ပြည်တွင်းစစ်တွင် ဖက်ဆစ်များအား ဆန့်ကျင်သည့်ဘက်က ၀င်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး ယင်းစစ်ပွဲကာလ သူ့အတွေ့အကြုံတစ်ရပ်ကို မူတည်၍`ထိုအပြုံး´(The Smile)အမည်ရှိ ၀တ္ထုတစ်ပုဒ် ရေးခဲ့သည်။ ၄င်းဝတ္ထုလေးအကြောင်း ကျွန်တော် ယခုပြောလိုပါသည်။`ထိုအပြုံး´ကိုသူသည် ကိုယ်တွေ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုအနေဖြင့်ရေး သည်လား၊ ၀တ္ထုတစ်ပုဒ်အဖြစ် ဖန်တီးခဲ့ခြင်းလား ကျွန်တော်မခွဲခြားတတ်ပါ။ သို့သော် ဖြစ်ရပ်မှန်ဟူ……ပဲ ကျွန်တော်ယူခဲ့ပါသည်။ ၄င်းစာ၌ ဆန်တက်ဇူပေရီက………. သူ့အား ရန်သူတို့ဖမ်းမိသွားပြီး အချုပ်ခန်းတစ်ခုထဲထည့်ထားလိုက်ကြောင်း၊ ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်သူတို့၏ စက်ဆုပ်မုန်းတီးပုံရသောအကြည့်နှင့် ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းဆက်ဆံပုံများအရ နောက်နေ့မှာတော့ သူ့အား သတ်မှာမုချဟု […]
Posted in: BooksLeaveacommentMM Book City	 28/06/2018
” ဖြစ်အောင်လုပ်ပါ “
၁၉၅၇- ခုနှစ်က ကယ်လီဖိုးနီးယားတွင် (၁၀)နှစ်အရွယ် ကောင်လေးတစ်ယောက် ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင် တစ်ခု ချသည်။ အဲသည်အချိန်က အမေရိကန်ကြေးစား ဘောလုံး (ရပ်ဂဘီဘော) လောကတွင် ဂျင်(မ)ဘရောင်းသည် အကျော်ကြားဆုံး နောက်တန်းအလယ်လူဖြစ်သည်။ ပိန်တာရိုးကောင်လေးကသူ့အော်တိုလက်မှတ်လိုချင် သည်။ သည်ရည်မှန်းချက် အောင်မြင်ရေးအတွက် ကောင်လေးမှာ ကျော်လွှားရမည့် အခက်အခဲတချိူ့ရှိ နေသည်။ သူသည် လူမည်း ဆင်းရဲသားရပ်ကွက်တွင် ကြီးပြင်းရ သူဖြစ်သည်။သူ့ခမြာ ဘယ်တုန်းကမှ ၀၀လင်လင် မစား ရ။အာဟာရ ချိူ့တဲ့မှုကြောင့်အရိုးပျော့ရောဂါ ရနေ သည်။ အရိုးပေါ်အရေတင်သည့် သူ့ခြေထောက် ခွင်ခွင် လေးကို သံမဏိထိန်းတံများဖြင့် ကျားကန်ပေးထား ရ သည်။ လောလောဆည်လည်းပိုက်ဆံမရှိသဖြင့် ဘောပွဲ ၀င်ကြည့်ရန် လက်မှတ်မ၀ယ်နိုင်။ ထို့ကြောင့် ဂျင်(မ) ဘရောင်း ကစားပြီး ပြန်တက်လာသည့် အချိန် တွေ့ဆုံ […]
“ကျောင်းစာအုပ်တွေထဲမှာ မပါတဲ့ ဘ၀သင်ခန်းစာ”
ရှီကျင်းပင်က ငယ်ငယ်က အရမ်း တကိုယ်ကောင်းဆန်တယ်တဲ့။ သားသမီးတွေ အတွက် တစ်ခုခုဝယ်လာရင် သူက အကောင်းဆုံးကို ယူတယ်။အဲဒါကြောင့် သူကို ဘယ်သူမှ အပေါင်းအသင်း မလုပ်ချင်ကြသလို ကစားဖော် သူငယ်ချင်းလဲ မရှိဘူးတဲ့။ ဒါကိုလည်း သူ့ရဲ့  အမှားလို့ သူမထင်ဘူးတဲ့။တရက်မှာတော့ သူ့အဖေက သူကို သင်ခန်းစာ ပေးချင်တာနဲ့ ခေါက်ဆွဲ ၂ ပွဲပြင်ထားတယ်။ တပွဲမှာ ကြက်ဥ ကို ခေါက်ဆွဲပေါ်မှာ တင်ထားပြီး နောက်တပွဲမှာ ကြက်ဥပါတာ မတွေ့ရဘူး။သူ့ကိုလဲ သား မင်းကြိုက်တဲ့ ခေါက်ဆွဲ ပွဲယူစား ဆိုတော့။ သူက ကြက်ဥပါတဲ့ ပွဲကို အရင်ယူ စားတာပေါ့။အဲဒီအချိန်တွေတုန်းက ကြက်ဥက တရုတ်ပြည်မှာ ဒီလောက်မပေါသေးဘူးတဲ့။ သူတို့ မိသားစုတွေ အတွက် နှစ်သစ်ကူးလို နေ့တွေမှာသာ […]
Posted in: BooksLeaveacommentMM Book City	 27/06/2018
“သင့်…​စွမ်း​ဆောင်​ရည်​ကို မြှင့်​တင်​ထားလိုက်​ပါ “
ကျ​နော်​ ဒီပုံ​လေးကြည့်​ပြီး သင်္ခဏ်းစာတစ်​ခု ရလိုက်​လို့ ဒီ​ခေါင်းစဉ်​​လေး ​ပေးဖြစ်​သွာားတာပါ ပုံ​လေးက အရမ်းရိုးရှင်းပါတယ်​ ဒါ​ပေမယ့်​ တကယ်​လည်း ထိမိလှတဲ့ ပုံရိပ်​​လေးတစ်​ခုပါ ဒီပုံ​လေးကိုလူတိုင်းမြင်​ဖူးသလို ပုံပြင်​​လေးအ​နေနဲ့လည်းရှိခဲ့ဖူးပါတယ်​… ဟိုး…အရင်​တုန်းက ကျီးကန်း​လေးတစ်​​ကောင်​ဟာ သူ​ရေဆာ​နေတဲ့အချိန်​မှာ ​အိုး​ဟောင်း​လေးတစ်​လုံး ကို ​တွေ့သွားတယ်​ ဒါနဲ့ ​ရေရှိမလားဆိုတဲ့ အသိနဲ့ အိုး​ဟောင်း​လေးရှိတဲ့​နေရာကို ချည်းကပ်​သွားတယ်​ ဒီလိုနဲ့ သူထင်​တဲ့ အတိုင်းပဲ ​ရေးအနည်းငယ်​လည်း ရှိ​နေပါတယ်​ မိုးရာသီအခါမှ မိုးရွာထားစဉ်​အခါက အနည်းငယ်​ ဝင်​​နေတဲ့ ​ရေ ​လောက်​ပါပဲ .ဒါ​ပေမယ့်​ ကျီးကန်း​လေးဟာ အပူတပြင်း ​ရေ​သောက်​ဖို့ကို ကြိုးစား​တော့တာ​ပေါ့ ဒါ​ပေမယ့်​ သူ့ရဲ့​ခန္ဓာကိုယ်​နဲ့ အိုးရဲ့ အဝ က အံမဝင်​ ဘူးဖြစ်​​နေတယ်​ ဒီ​တော့ ကျီးကန်း​လေးလည်း အကြံထုတ်​​တော့တာ​ပေါ့ ​နောက်​​တော့ သူအကြံ​ကောင်းတစ်​ခုရသွားတယ်​ ​ဘေးအနီးနားမှာရှိ​နေတဲ့ ​ကျောက်​ခဲ​လေး​တွေကို […]
Posted in: ပုံပြင်LeaveacommentMM Book City	 26/06/2018
စာဖတ်တယ်ဆိုတာ… တခြားလူရဲ့ ပုံပြင်ထဲကနေ ကိုယ့်အတွက် သင်ခန်းစာရှာလိုက်တာပါ။ စာဖတ်တယ်ဆိုတာ… ကံဆိုးခြင်းတွေထဲက အကောင်းမြင်တတ်အောင် ကိုယ့်အတွက် ဖိအားပေးတဲ့ ရင့်ကျက်ခြင်းတွေပါ။ စာဖတ်တယ်ဆိုတာ… သောကရဲ့ မီးလျှံတွေကို ကိုယ့်အတွက် အေးချမ်းစေမယ့် စိတ်ငြိမ်ဆေးတွေပါ။ စာဖတ်တယ်ဆိုတာ… ဘဝတိုက်ပွဲများစွာကို ဖြတ်သန်းဖို့ ကိုယ့်အတွက် လက်နက်တွေ စုစည်းလိုက်တာပါ။ စာဖတ်တယ်ဆိုတာ… ဝမ်းနည်းမှုကြားက မျက်ရည်တွေကို ကိုယ့်အတွက် တယုတယသုပ်ပေးမယ့် အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေတွေပါ။ စာဖတ်တယ်ဆိုတာ… ယိုင်နေတဲ့ ခြေလှမ်းတွေကို ကိုယ့်အတွက် ပြုပြင်ပေးမယ့် အသိဥာဏ်တွေပါ။ စာဖတ်တယ်ဆိုတာ… အရှုံးရဲ့ ရလဒ်တွေကနေ ကိုယ့်အတွက် ပြန်လည်ကြိုးစားဖို့ အားမာန်တွေပါ။ စာဖတ်တယ်ဆိုတာ… အမှားမကင်းတဲ့ လူ့ဘဝမှာ ကိုယ့်အတွက် နောင်တနည်းစေမယ့် နည်းလမ်းကောင်းတွေပါ။ စာဖတ်တယ်ဆိုတာ… လက်တွေ့မကျပေမယ့် ကိုယ့်အတွက် အကျ,မနာအောင် ကာကွယ်လိုက်တာပါ။ စာဖတ်တယ်ဆိုတာ… အလကားအချိန်ဖြုန်းသလိုမဖစ်အောင် ကိုယ့်ဘဝအတွက် […]
Posted in: ဆောင်းပါးLeaveacommentMM Book City	 26/06/2018
လူတစ်ဦးတစ်ယောက်အပေါ်မှာ “နားလည်မှု” ရှိဖို့ဆိုတာ တကယ်တော့ မလွယ်လှပါဘူး။ တခါတလေ နားလည်အောင်ကြိုးစားနေရတာကိုက ပင်ပန်းရတယ်။ နားလည်ဖို့ကြိုးစားရင်နဲ့ပဲ သည်းမခံနိုင်တာတွေ ပိုများလာတတ်ပါတယ်။ သူကလည်း သူ့စရိုက်နဲ့ သူ့အကျင့်နဲ့။ ကိုယ်ကလည်း ကိုယ့်စရိုက်နဲ့ ကိုယ့်အကျင့်နဲ့ကိုး။ စိတ်သဘောထားခြင်းကတေ့ာ ဘယ်လိုမှမတူနိုင်ပါဘူး။ သေချာစဉ်းစားကြည့်ရင် ကိုယ့်စိတ်တောင်ဒီနေ့နဲ့မနက်ဖြန် မတူနိုင်ပါဘူး။ သူကောင်းမှကိုယ်ကောင်းမယ်ဆိုရင် ဘယ်မှကောင်းတဲ့သူရှိလာပါမလဲ ဆိုသလို မတူညီမှု့တွေအတွက် ကိုယ့်ဖက်က ကြိုးစားလို့ရတာ တစ်ခုတော့ရှိပါတယ်။ “ခွင့်လွှတ်ခြင်း” ပါပဲ။ တဖက်သားကို ခွင့်လွှတ်နိုင်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲ…. စိတ်ပေါ့ပါးသွားတယ်။ လွတ်လပ်သွားပါတယ်။ “ခွင့်လွှတ်ခြင်း” ရဲ့နောက်မှာ မေတ္တာစိတ်တွေဖြစ်လာတယ်။ မေတ္တာစိတ်ဖြစ်လာတော့ ပိုပြီးခွင့်လွှတ်နိုင်လာတယ်။ ဒါကြောင့် တဖက်သားကို နားမလည်နိုင်ရင်တောင် ခွင့်လွှတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားရင် ဘဝမှာ အလွန်အေးချမ်းပါတယ်။ ဘဝဆိုတာတိုတိုလေးပါ။တယောက်နဲ့တယောက်ဘာကြောင့်များ အာဃာတတွေ အမုန်းတရားတွေမနာလိုမှုတွေထားနေမှာလဲ။ ခွင့်လွှတ်ခြင်းရဲ့ အရသာကို ခွင့်လွှတ်ခဲ့ဘူးသူတိုင်း ခံစား ဖူးပါလိမ့်မယ်။ လက်စားချေခြင်းဖြင့် […]